नेपालमा कहिले आइपुग्छ कोरोनाको खोप ? चमत्कार हुने मन्त्रीको यस्तो जवाफ - Media Dabali
नेपालमा कहिले आइपुग्छ कोरोनाको खोप ? चमत्कार हुने मन्त्रीको यस्तो जवाफ
काठमाडौं – कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन १६ हजार खोप केन्द्रलाई उपयोगमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीतिगत र कानूनी जटिलता फुकाइसकेको भन्दै खोप कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २ देखि ८ डिग्री तापक्रममा १ करोड ७० लाख खोपको डोज भण्डारणका गर्ने क्षमता सहितको पूर्वाधार तयार पारिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको खोप फागुनसम्म आउन सक्ने संकेत गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने बताएका छन् । खोप अन्योलसम्बन्धी जिज्ञासामा मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत जीवनमा फागुन महिना चामत्कारिक हुन्छ । यसपालि पनि फागुन चामत्कारिक होला भनेर आशा गरौं ।’
उनले सरकार सरकारबीचको खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने भन्दै खोप आयातका लागि आन्तरिक तयारी धेरै अघि बढिसकेको बताएका छन् । आफूले रुस, भारत र अरबका राजदूतसँग खोप प्राप्तिका सन्दर्भमा कुरा गरेको उनले बताए । ‘खोप प्राप्तिका लागि सरकार गम्भीर छ । सरकारले आफ्ना हरेक च्यानल र सम्भावनालाई अघि बढाइरहेको छ,’ उनले भने ।
कोभ्याक्समार्फत २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप प्राप्तिको सुनिश्चितता करीब–करीब भइसकेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराइने भन्दै सरकार सरकारबीचको खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘कोभ्याक्समाथि मात्रै हामी निर्भर छैनौं । उसले दिनुभन्दा अघि अरू खोप आउँछ । तत्तत् देशको सरकारको सहयोग लिएर अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने ।
खोप कोषमा जम्मा गर्न विदेशी दातृ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्ने तयारी थालिएको छ । खोप कोषमा अर्थ मन्त्रालयबाट ५० करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म खोप सन्दर्भमा तत्कालीन काम गर्न ६८ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताएका छन् । दक्षिण एसियामा खोप प्राप्तिका लागि नेपाल पछि नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले प्राप्त भएको खोप निःशुल्क लगाउने जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।